mRve, Author at Royal TVRoyal TV
Tuesday, October 24, 11:20 am
Author Archives: mRve
Madaxweynaha KGS Oo Ku Baaqey In Xildhibaanada 2016 Lagu Soo Xulo Nidaamka 4.5
Posted on December 14, 2015 by mRve
14-Dec-2015-Madaxweynaha Dowlada Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku baaqay in xildhibaanka 2016 lagu soo xulo nidaam beeleedka 4.5, isaga oo ka digay in wax lagu qeybiyo qaabka degmooyinka.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa sheegay in nidaam beeleedkani muddo badan lagu soo dhaqmayay dowlado badanna lagu soo dhisay, Soomaalidana hadda isku fahmi karto, balse hadii nidaamkaasi laga gudbo laga yaabo inay imaato dood ah in dad laga tagay ama wax la mid ah.
“Degmooyinka hadii la dhaho waxaan ogahay in dad hadda baarlamaanka ku jira oo aan hadhow wax heli doonin baa dhacaya, bal ka waran qof hadda xildhibaan ah, hadii la dhaho waxbo meesha kuma lehdiin” ayuu hadalkiisa raaciyay Shariif Xasan, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay Shirka madasha wadatashiga qaran ee geeddi socodka doorashada 2016-ka, kaasi oo Laba maalin socon doona.
Posted in Breaking News, Headline, Local News, News
Xog & Gorfeyn: Maxaa laga filan karaa Shirka wadatashi ee ka socda Muqdisho
14-Dec-2015- Madaxda Dowladda Federalka iyo kuwa Maamul-gobaleedyadda haatan dhisan ayaa waxa u bilowday Shir ay kaga doodayaan Nidaamka Dowladeed ee la dhisi doono iyo Qaabka lagu soo dooran karo.
Shirka Wada-tashiga Qaranka ayaana ah bilow aad u wanaagsan, maadaama ay Hoggaamiyayaasha Heerka Qaran iyo kuwa Heerka Gobal hal madal kaga tashanayaan Nidaamka lagu hagi doono Qaranka marka la gaaro bisha August ee sannadka soo socda.
Madaxda waxaa u cad Hir Siyaasadeed iyo Damac Khaas ah, waxayna si il-duufsi leh u hareer marayaan arrimaha Asaaska u ah Ka-hadalka Qoddobkaasi.
Xaqiiq ahaan, Shirar ujeedo badan ah ayaa ka kala socda magaalladda Muqdisho iyo caasimadda dalka Jabuuti, iyadoo Shirka Muqdisho diiradda lagu saarayo Nidaamka Doorashadda iyo Qaabka Dowladda soo socota, halka Shirka Jabuutina lagu eegayo Saami-qeybsiga Kheyraadka dalka.
Carabta waxay ku maahmaahdaa qofkii hal mar isku fuulo labo faras dubarka ayuu ka waaxmaa, taasi waxaa la mid ah Shirarka ka kala socda Muqdisho iyo Jabuuti oo mid yahay Waaqiciga Taagan iyo mid Mustaqbal aan la gaarin, oo u eg sidii Sheekadii Lacalla.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in loo baahan yahay in marka hore Xal-dhexe laga gaaro Nidaamka Dowladda iyo Awood-qeybsiga Xilalka Qaranka, markaasi kadib in laga fekero Ajendayaasha muhiimka ah, iyadoo Qorshaha Kheyraad-qeybsiga imaan karo marka la helo Somali Nabad ah, mideysan oo isku Mowqif ah.
Dhowr Kala-doorasho (Options) ayaa miiska saaran si la isugu raaco Nidaamka Doorashadda iyo Awood-qeybsiga Xilalka Qaranka, waxayna Madaxdu kala taageersan yihiin in Nidaamka Doorashadda noqoto:
Doorasho Nidaamka Awood-qeybsiga haatan jira ee 4.5 ama
Doorashadda Degmooyinkii jiray Xilligii Dowladda Kacaanka.
Xaqiiq ahaan, Labadaasi Ra’yi ayaa lagu kala dhegan yahay, inkastoo loo badan yahay in lagu sii dhaqmo Nidaamka ay Dowladda Federalka iyo Dowladihii KMG ku dhisnaayeen ee 4.5
Nidaamkaasi waxa uu dhiig-joojin u ahaa Daruufihii xilligaas lagu sugnaa, inkastoo weli ay jirto baahida khasbayso in lagu sii tisqaado Nidaamka 4.5.
Xaqiiq ahaan, Nidaamkaasi waxaa loo qaatay si Xal loogu helo Khilaafyadda Ummadda kala gaaray, waxayna Nidaamka 4.5 qeyb ka tahay Tallaabooyinka Dib-u-heshiisinta iyo Dib-u-mideynta Beelaha Soomaaliyeed.
Siyaasiyiinta Dowladda Dhexe iyo kuwa Maamul-gobaleedyadda waxay u muuqdaan inay culayska ugu muhiimsan saareen Nidaamka Doorashadda, balse uma muuqdaan kuwo ka hadlayo Dedejinta Maamul-gobaleedyadda dhismi doono, Aqoonsiga kuwa weli magac ahaanta u taagan iyo sidii loo wajahi lahaa in Walaalaha Somaliland laga gar baxo, laga raalli-geliyo Qoddobadda ay gocanayaan, kadibna lagu sharfo inay Kaalintooda ka qaataan Waayaha Soomaalida cusub, Federalismka iyo Midnimadda Qaranka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa habboon in aysan Madaxda Qaranka iyo kuwa Heerka Gobalka waqtiga ku luminin inay wada laacaan Doodaha ku aadan Figta Sare ee Nidaamka doorashadda oo keliya, balse waa in la tixgeliyo Taabagelinta Maamul-gobaleedyadda dhismayo iyo Maslaxadda Dhamaystiran ee Dadka iyo Dalka Soomaaliyeed.
Xaalada magaalada Beledweyn oo saaka degan, kadib dagaalkii shalay
14-Dec-2015-Xaalada magaalada Beledweyn ayaa saaka degan, kadib dagaal culus oo shalay ka dhacay xaafada Howl-wadaag, kaasoo u dhaxeeyay labo maleeshiyo beeleed oo dega galbeedka magaalada.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyn, waxaana dagaalada ku soo noq noqday magaalada ay salka ku hayaan dilal ka dhacay galbeedka magaalada
Madaxweyne Xasan”Wada-tashigu waa Fursadda Mustaqbalka Siyaasadeed ee Dalka”
14-Dec-2015-Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh oo si rasmi ah Muqdisho uga furey Madasha Wadatashiga Qaran ee lagu go’aamin doono nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa sannadka 2016-ka, ayaa sheegay in madashani ay fusad u tahay shacabka Soomaaliyeed si ay go’aan uga gaaraan mustaqbalkooda siyaasadeed.